चाडबाडमा महँगीले आकाश छेड्यो ! – Everest Dainik – News from Nepal
चाडबाडमा महँगीले आकाश छेड्यो !
काठमाडौं, असोज २५ । चाडबाडमा मीठो खान र राम्रो लाउन सबैलाई रहर हुन्छ। व्यापारीले भने यही बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ बढाएका छन् ।
थोकमा प्रतिकिलो ३५ रूपैयाँमा पाइने आलुको मूल्य ४५ पुगेको छ। गोलभेंडाको मूल्य पनि नपत्याउने गरी अकासिएको छ। गोलभेंडा ‘अफ सिजन’ भएकाले मागअनुसार आपूर्ति नभएको हो। अघिल्लो साता ४५ रूपैयाँमा पाइने गोलभेंडा ७५ रूपैयाँमा पुगेको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।